WINE 7.0 Inosvika neWoW64 Improvements uye Zvirinani Theming Support | Linux Addicts
Pakupera pakanga pasina wechinomwe Release Candidate, uye kutangwa hakuna kuitika neChishanu. Yakatangwa nezuro, Chipiri, asi chakakosha ndechekuti WAINI 7.0 ya asvika muchimiro cheshanduro yakagadzikana. Pakati pezvitsva zvayo, WineHQ inosimbisa zvishoma sepavanoburitsa mavhezheni ekuvandudza masvondo maviri ega ega, asi isu tichaongorora yakanyanya kunaka yasvika pamwe neyechinomwe huru yekuvandudza software yekumhanyisa maWindows application pane mamwe masisitimu anoshanda.
Izvo zvinoratidzwa neWineHQ sezvitsva zvinoratidzira ndezvekuti mazhinji mamodule akashandurwa kuita PE fomati, zvirinani tsigiro yetimu, ine dingindira rinosanganisirwa kutaridzika kwazvino, yakagadziridzwa HID stack uye joystick rutsigiro uye itsva WoW64 architecture.
1 WINE 7.0 inosimbisa
WINE 7.0 inosimbisa
Shanduko yezvakawanda zveWINE zvikamu kuita Portable Executable (PE) fomati senge maraibhurari eWineGStreamer, DNSAPI, Secur32, WPCAP, WinePulse, WinSock, IPHLPAPI, Shell32, WineBus, IPHlpApi, NsiProxy, WineDbg, MSXml, XAudio, Coreaudio , nezvimwe.
Tsigiro ye theming kune ese WINE akavakirwa-mukati zvirongwa. Yakawedzerawo akavakirwa-mukati "bhuruu" uye "classic bhuruu" madingindira. Zvakare kumberi kwethem pane ikozvino kwakaringana scrollbar rutsigiro pamwe nepamusoro HiDPI theming.
HiDPI rutsigiro rweWINE yakamisikidzwa maapplication yakagadziridzwa.
Yekutanga HID-based joystick backend yakaunzwa, iyo yakakura gore rapfuura kusvika pakugoneswa nekusarudzika.
Yakagadziridzwa kuenderana neOpenCL 1.2.
VKD3D 1.2 rutsigiro sechikamu cheWINE's Direct3D 12 pamusoro peVulkan kuedza.
Tsigiro yeRosetta ndangariro dhizaini inoshandiswa muApple Silicon / Apple M1 Macs.
Kuvandudzwa kweplug uye kutamba mutyairi rutsigiro.
Tsigiro yekurodha maraibhurari kubva kune architecture-specific subdirectories. Iyo WINE kuvaka sisitimu yakagadziridzwa zvakare yakatenderedza tsigiro yezvivakwa-zvakananga madhairekitori.
Basa ratanga parutsigiro rweMSDASQL seMicrosoft OLE DB mupi weOpen Database Connectivity (ODBC) vatyairi. MSDASQL inokutendera iwe kuti uwane / ubatanidze kune akasiyana DBMS data masosi anopihwa nevatyairi veODBC kubva kuOracle kuenda kuMicrosoft Access uye nezvimwe.
Ese asara masvomhu mabasa muC runtime (CRT) akaunzwa kubva kuMusl libc C raibhurari.
Kuitwa kweakawanda hunde kubva ku32-bit kusvika 64-bit uye rimwe basa reWoW64.
Unicode 14 rutsigiro.
Yakasiyana kuvandudzwa kuWinRT.
Mazana ekugadzirisa tsikidzi.
Iyo WINE 7.0 sosi kodhi ikozvino inogona kutorwa kubva izvi uye izvi kumwe kubatana. Mu kurodha peji mabhinari uye ruzivo rwekuwedzera repository mukugovera senge Debian uye Ubuntu zviripo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » WINE 7.0, yave kuwanikwa, inounza kuvandudzwa kuWoW64 uye nerutsigiro rwetheme iri nani, pakati pezvimwe zvinhu zvitsva.
15-Minute Bug Initiative inovavarira kumisa KDE kubva pakuva "buggy" zvachose.